Kungani izithonjana zingaveli ku-iPhone yami? iPhone News
U-Ignacio Sala | 24/04/2022 12:00 | Okokufundisa namanyuwali
Kulesi sihloko sikubonisa izizathu Kungani izithonjana zingaveli ku-iPhone?. Sekuyiminyaka, izithombe-mzwelo ziyindlela eshesha futhi elula yokuveza imizwa nemizwa ikakhulukazi.
Ngokufika kwe- i-memojis, i-Apple yandisa amandla e-emoji, ivumela umsebenzisi dala izithombe-mzwelo zangokwezifiso ngobuso bakho. Uma idivayisi yakho iyekile ukubonisa ama-emojis noma ingakaze ibe naleyo nketho, kulesi sihloko sizokukhombisa izizathu nezixazululo ezingaba khona.
1 Izithombe-mzwelo azibonisi ku-iPhone yami
1.1 I-Dispositivo antiguo
1.2 Idivayisi ngaphandle kokubuyekezela enguqulweni yakamuva
1.3 Ikhibhodi yama-emoji isusiwe
2 Ungayifaka kanjani ikhibhodi ye-emoji ku-iOS
3 Ungazisebenzisa kanjani izithonjana ku-iPhone
4 Ungawashintsha kanjani amagama nge-emojis emibhalweni ku-iPhone
5 Ungazisebenzisa kanjani izithonjana ku-Mac
6 Ungayengeza kanjani ikhibhodi ku-iPhone
7 Indlela ukususa ikhibhodi ku-iPhone
Izithombe-mzwelo azibonisi ku-iPhone yami
Izizathu zombuzo wokuthi kungani izithonjana zingaveli ku-iPhone zifinyezwa ku-3:
Idivayisi ngaphandle kokubuyekezela enguqulweni yakamuva
Ikhibhodi yama-emoji isusiwe
U-Apple wethule ama-emojis ne Ukukhishwa kwe-iOS 5, inguqulo engafinyelelanga ku-iPhone 3G. Uma idivayisi yakho ingabonisi noma ingavumeli ukusetshenziswa kwama-emoji, usuvele uyazi ukuthi kungani.
El I-iPhone 3G yahlala ku-iOS 4. Mancane amathuba okuthi, namuhla, noma yimuphi umsebenzisi angakwazi ukuqhubeka esebenzisa le divayisi.
Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi amadivaysi afika emakethe kamuva, azikabuyekezwa zibe izinguqulo ezintsha eyaqala ukufaka ukusekelwa kwama-emoji.
Ngezikhathi ezithile, u-Apple wethula ama-emojis amasha ngezibuyekezo zesoftware. Ukuze ukwazi ukubuka kokubili futhi usebenzise lawa ma-emoji, kuyadingeka ukuthi uhlale unenguqulo yakamuva ye-iOS efakiwe.
Hhayi kuphela ukukwazi ukujabulela i-emojis, kodwa ngoba ngale ndlela, iPhone yethu izohlala ivikelekile ngaphambi kwanoma yikuphi ukuba sengozini okutholwe kokubili kusistimu nakuzinhlelo zokusebenza eziyiqambayo.
Uma idivayisi yethu ibuyekezelwa enguqulweni yakamuva futhi ama-emojis engaveli ndawo, inkinga ikukhibhodi yama-emoji.
Uma singenayo ikhibhodi ye-emoji efakiwe, ngeke kwenzeke ukuwasebenzisa kudivayisi yethu. Isixazululo kuphela sokuxazulula le nkinga ukufaka kabusha ikhibhodi ye-emoji ku-iPhone.
Ungayifaka kanjani ikhibhodi ye-emoji ku-iOS
para faka ikhibhodi, okungaba ama-emoji noma awanoma yiluphi olunye ulimi, kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Sithola ifayela le- Izilungiselelo yedivayisi yethu ngesikrini sasekhaya.
Ngaphakathi kwezilungiselelo, chofoza ku General.
Okulandelayo, chofoza ku Ikhibhodi > Ama-Teclados
Chofoza ku- Faka ikhibhodi entsha.
Ohlwini, sibheka I-Emoji bese uchofoza kukho ukuze ufake.
para faka amakhibhodi ngezinye izilimi, kumelwe senze izinyathelo ezifanayo.
Ungazisebenzisa kanjani izithonjana ku-iPhone
Uma sesiyifakile ikhibhodi ye-emoji ku-iPhone, lapho sifinyelela ikhibhodi, isithonjana sesithombe-mzwelo siyaboniswa esikrinini. ekhoneni elingezansi kwesokunxele lekhibhodi.
Ukuchofoza kuyo kuzobonisa kokubili i-memoji yomuntu siqu esiwadalile, kanye nalo lonke iqoqo lama-emoji afakwe enguqulweni ye-iOS esiyifakile.
Kodwa, uma ngaphezu kwekhibhodi ngeSpanishi nama-emojis, sifake amakhibhodi ngezinye izilimi, isithonjana esisinika ukufinyelela kuzithombe-mzwelo. ingakwesokudla kwenkinobho okusinikeza ukufinyelela kukho kokubili izinombolo nezinhlamvu ezikhethekile.
Uma sichofoza ku- imbulunga, ikhibhodi ekhonjiswe ekhoneni elingezansi kwesokunxele, amakhibhodi azoshintsha phakathi kwawo wonke afakiwe. Uma siyigcina icindezelwe, kuzoboniswa ukudonsela phansi kanye nawo wonke amakhibhodi afakiwe.
Ungawashintsha kanjani amagama nge-emojis emibhalweni ku-iPhone
Njengoba sithayipha kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza, i-iOS ngokuzenzakalelayo iphakamisa i-emoji esekelwe egameni esikubhalile kubha yesiphakamiso. Uma sifuna ukusebenzisa leyo emoji, kufanele nje sichofoze kuyo futhi igama lizothathelwa indawo yi-emoji.
Uma sinenhlanhla ngokwanele ukuthi umbuthano wethu wabangane usebenzisa inkundla yemiyalezo ye-Apple, Imilayezo, akudingeki ukuthi sichofoze izithonjana eziphakanyiswa yikhibhodi, njengoba uhlelo lokusebenza lisivumela ngokuzenzakalelayo ukuthi shintsha amagama nge-emojis.
Uma sifuna ukusizakala ngalokhu kusebenza kohlelo lokusebenza lwemilayezo, kufanele senze izinyathelo engikubonisa zona ngezansi:
Sibhala umbhalo engxoxweni esesivele siyidalile noma sidale entsha.
Ngemuva kwalokho sishintshele kukhibhodi ye-emoji ngokuchofoza isithonjana esibamele.
Okulandelayo, idivayisi yethu izohlaziya wonke amagama embhalweni futhi uzosikhombisa amagama awolintshi abanama-emoji abo ahambisanayo.
Ngokuchofoza amagama awolintshi, sizoshintsha igama ngokuzenzakalelayo nge-emoji ehambisanayo.
Ungazisebenzisa kanjani izithonjana ku-Mac
I-Apple yenza kutholakale kubo bonke abasebenzisi be-macOS, luchungechunge olufanayo lwezithombe-mzwelo olutholakala ku-iOS, kufaka phakathi izinguqulo ezahlukene ngokusho kombala wesikhumba.
Uma usebenzisa inguqulo yakamuva ye-macOS, ungasebenzisa izithonjana ezifanayo ezitholakala enguqulweni yakamuva ye-iOS etholakalayo. Uma kungenjalo, ungasebenzisa kuphelaos eyethulwe yi-Apple enguqulweni oyisebenzisayo.
Ngokungafani ne-iOS, uma sifuna ukufinyelela ama-emojis, asikwazi ukushintsha ikhibhodi, kodwa kufanele, ukuze sifinyelele, kufanele sisebenzise isinqamuleli sekhibhodi ukusuka endaweni yekhesa lapho sifuna ukwengeza khona isithonjana.
Uma sesibeke ikhesa lapho sifuna ukubeka khona isithombe-mzwelo esisodwa noma eziningi, sizocindezela izinkinobho Control + Command ⌘ + Spacebar. Ngokuchofoza ngayinye yazo, izovezwa embhalweni.
Ngalesi sinqamuleli sekhibhodi, singakwazi nokubhala ama-pictogram, izimpawu zobuchwepheshe, izinhlamvu, izimpawu nezimpawu ezijwayelekile like ⌘ ⎋ ⏎ ⎆ ⎉ ⍶ ► ◻︎ ® ☎︎
Ungayengeza kanjani ikhibhodi ku-iPhone
Ohlwini, sibheka igama lolimi esifuna ukulifaka njengekhibhodi bese uchofoza kukho ukuze ufake.
Indlela ukususa ikhibhodi ku-iPhone
Sithola ifayela le- Izilungiselelo ku-iPhone kusuka esikrinini sasekhaya.
Siya kwimenyu General.
Ukuze sisuse ikhibhodi siyayislayida Ngakwesobunxele bese uchofoza ku Susa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Kungani izithonjana zingabonakali ku-iPhone yami?
I-iOS inyusa isabelo sayo semakethe uma iqhathaniswa ne-Android ewayo